Tarihan'Andriamanitra ny zanany
"Fa izay tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra" - Rom. 8:14.
Ny Fanahy Masina dia persona satria miara-milaza amin'ny fanahintsika Izy fa zanak'Andriamanitra isika. Ao amin'izany filazana izany ihany ny porofon'ny fahamarinany. Noho izany dia mino isika ary mahazo antoka fa zanak'Andriamanitra isika. — Ev, 616 [...1
Ny Fanahy Masina no hanome ny fahafaha-manao avy amin'Andriamanitra ho an'izay manompo an'i Kristy, ary hamolavola sy hanitsy ny olona araka ny fenitr'Andriamanitra, ary arakaraka ny hanirian'ny olona izany fanovana izany no hanatanterahany azy. — YI, 05 Jolay 1894
Handray fahazavana sy hohamasinina ireo izay manaiky hotarihin'ny Fanahin'Andriamanitra. Ho takatr'izy ireo ny haratsin'ny fahotana sy ny fahatsaran'ny fahamasinana. Ho voninahitra lehibe ho azy ireo ny hiantsoana azy hoe zanak'Andriamanitra. Ho fantany koa fa tena tsy mendrika mihitsy izy ireo ny ho tafaray amin'i Kristy, ilay Zanaka lahitokan'ny Ray. Noraisin'i Kristy teny Aminy anefa ny toetsika, mba hahafahany ho tafaray amintsika. Nijaly tao amin'ny nofony Izy (...) mba hahafahany mitondra zanakalahy sy zanakavavy maro ho eo amin'Andriamanitra. — YI, 08 Martsa 1892
Ny Fanahy no mampamiratra ao amin'ny haizin'ny saina ny tara-pahazavan'ilay Masoandron'ny Fahamarinana. Izy koa no mampiredareda ao am-pon'ny olona ny fahatakarana ny fahamarinana momba ny mandrakizay. Ny Fanahy koa no mamelona ny finoana Ilay hany mahavonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Ary mbola ny Fanahy ihany no miasa mba hanovana ny toetra amin'ny alalan'ny fanesorana ny fitiavan'ny olona amin'ny zavatra mandalo sy mety lo, fa mampifantoka izany kosa ho amin'ny lova mandrakizay. Ny Fanahy no mamorona indray, manadio sy manamasina ny olombelona, ary manefy azy ireo mba ho tonga mambran'ny fianakavian'Andriamanitra, ho zanaky ny Mpanjakan'ny lanitra. — GW, 286,287